Go’aamadii ka soo baxay Shirwaynihii wadatashiga beelaha Raascasayr iyo Laasasurad | raascasayrmedia.com
← Ciidamada badda dalka Hindiya oo qabtay 61 burcadbadeed Soomaaliyeed ah kaddib markii ay dagaallameen
Maraykanka iyo Denmark oo ka wadahadlay arimaha burcad badeeda →
March 15, 2011 · 3:24 pm
Go’aamadii ka soo baxay Shirwaynihii wadatashiga beelaha Raascasayr iyo Laasasurad
beelaha Siwaakhroon waxay isugu yimaadeen shirwayne guud oo taariikhi ah, shirkaa oo qabsoomay 10/3/2011 dhamaadayna 15/3/2011 kana dhacay degmada Baargaal, shirkaa waxaa ka soo qaybgalay Beeldaaajaha Calbari iyo dhamaan Salaadiinta iyo Nabadoonada, siyaasiinta, Aqoonyahannada, Ganacsatada, Qurbojoogta, Haweenka, Dhalinyarada, iyo ururada bulshada ee beesha siwaakhroon ee degaamada Raascasayr iyo Laaasasurad.
Ka dib markiii dhinacyo badan laga eegay dhibaatooyinka ka jira ee ragaadiyay degaamada iyo baahida loo qabo maamul hanta arimahooda dhaqan dhaqaale, bulsho, siyaasadeed iyo amniba, wada tashi iyo falanqayn dheer ka dib waxaa lays ku raacay go’aamada soo socda.
1. In midnimada Puntland la wada ilaaliyo, jiritaankeeduna yahay mid muqaddas ah.
2. In maamul tayo leh oo wax ku ool ah loo dhiso degaanadaRaascasayr iyo Laasasurad si ay wax uga qabtaan arimaha dhaqan dhaqaale, Siyaasadeed, bulsho iyo amaanka degaanada.
3. In la dhiso Gobal ka kooban 7 degmo iyo 73 tuullo oo lagu magacaabo Raas Casayr kaasoo loo gudbiyay 2003 dii maamul Goboleedka Puntland marar badana lagala hadlay arrintaas.
4. In bulshaweynta degta degaanada Calbari iyo Laasasurad ka helaan xuquuqda ay ku leeyahiin Puntland ha ahaato arimaha siyaasada, bulshada, sugidda amaanka iyo shaqo siinta.
5. In maamulka Puntland uu dhowro kana fogaado wax allaale waxii khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo wada noolaanshaha beelaha walaalaha ah ee wada degan degaanka sida degmada baargaal.
6. In degmooyinka Baargaal iyo Caluule ay ka tirsan yihiin 96dii degmo ee ka jiray Soomaaliya burburka ka hor isla markaana laga aqoonsan yahay dowladda Soomaaliya iyo Puntlandba, ilaalinta xudduudahooduna ay yihiin arrin muqaddas ah oo aan gorgortan lahayn .
7. In guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay ku noolaato nabad iyo walaalnimo si loo soo celiyo karaamadii iyo qaranimaddii somaaliya, lana joojiyo cooladaha ka aloosan Soomaaliya , waxii khilaaf ahna lagu dhameeyo is fahan iyo wadahadal.
8. In uu joojiyo dagaalada uu ka hurinayo maamulka Siilaanyo Gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn gaar ahaan deegaanka kalshaale.
9. In la joojiyo dagaalada ka dhexeeya beelaha walaalaha ee wada dega Puntland, khilaafka jirana lagu dhameeyo si nabadgelyo ah oo daacadnimo iyo cadaalad ku dhisan.
10. In laga hortago lana joojiya dilalka qorshaysan ee ka taagan magaaloyinka waawayn ee deegaanada Puntland sida Galkacayo iyo Boosaaso.
11. in laga hortago lalana dagaalamo dhamaan burcadbadeeda noocay tahayba iyo meelay joogtaba.
12. In laga hortago lalana dagaalamo maraakiibta xaalufisa badaha kuwaas oo sida sharcidarada ah u xaalufiya badaha kuna andacooda inay haystaan sharciyo balse been abuur ah.
13. in la joojiyo xaalufinta deegaanada sida dhirta iyo dabargoynta ugaarta.
14. in la joojiyo wasakhaynta bad iyo barriba lagu hayo degaanada soomaaliya.
15. Waxaanu ka codsanaynaa hay’adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn inay nagala qaybqaataan dib u dhiska iyo horumarinta degaankan la illaaway ee u baahan kaalmo dagdag ah, waxaana diyaar u nahay in aanu sugno nabad galyadooda iyo hantidooda .
16. Waxaanu ka codsanaynaa Dowlada Puntland, hay’adaha caalimiga, Sida UN, jaamacada Carabta, EU, AU, iyo Ururada Islaamka inay ka qaybqaataan abaaraha ka taagan Somaaliya gaar ahaan Degaanada Raas Casayr.
17. Waxaanu soo dhawaynaynaa ciddii danaynaysa inay maagashato degaankan.
18. Waxaanu ku boorinaynaa qurbo joogta deegaamadan u dhashay inay ka qaybqaataan dhismaha maamulka, dib u dhiska iyo horumarinta degaamadan kor ku soo xusnay.
2 responses to “Go’aamadii ka soo baxay Shirwaynihii wadatashiga beelaha Raascasayr iyo Laasasurad”
waxaan tageer sanahay go aan madii ka soo baxay shirkii wada tashiga iyo nabada ee ku soo dhamaday baargaal
Waxaan soo dho waynayaa aad ugu hanbalyaynayaa qodobada rasmiga ah ee kasoo baxcay shirrkii degmada baargaal ee beelaha siwaaqroon waxaan aad ugu mahad celinayaa una hanbalyanya dhamaan wax garadkii aqoon yahaynaddii isimadii ,nabadoonadii ,culimaa udiinkii, aqoonyahanada. ganacsada.haweenka iyo dhalin yarada